Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BFS oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay R/wasaare ROOBLE +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BFS oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay R/wasaare ROOBLE +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya ayaa Arbacada maanta ah cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka, Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
215 Xildhibaan ayaa fadhiday kulanka Golaha Shacabka ma jirin Xildhibaan diiday ama ka aamusay cod u qaadista Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka Mudane Rooble.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay inuu ansax yahay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee dalka ee maanta la meel mariyay.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka ayaa intaasi kaddib waxa uu dhaariyay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo lagu dhaariyay Kitaabka Qur’aanka Kariimka.
Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa jeediyay kalimad uu ugu mahadcelinayo Xildhibaannada Golaha Shacabka Soomaaliya codka aqlabiyad leh ee ku ansixiyeen, isagoona ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh.
Tags: R/Wasaare Rooble oo la ansixay, xildhibaannada golaha shacabka ansixin
Madaxweyne Farmaajo oo kala hadlay guddoonka Labada Aqal ee BF Somalia heshiiskii Doorashooyinka +(SAWIRO)